PhoneWagon: Ny zavatra rehetra ilainao hampiharana ny fanaraha-maso ny antso miaraka amin'ny Analytics | Martech Zone
Rehefa manohy mandrindra ny fampielezan-kevitra sarotra amin'ny multi-fantsona ho an'ny sasany amin'ireo mpanjifanay izahay, dia tsy maintsy fantarintsika hoe rahoviana ary nahoana no miantso ny telefaona. Afaka manampy hetsika ianao amin'ny nomeraon-telefaona misy rohibe hanara-maso ny statistikan'ny click-to-call, fa matetika tsy izany no mety. Ny vahaolana dia ny fampiharana fanaraha-maso antso ary ampifandraiso amin'ny analytics ianao mba hijerena ny valintenin'ny prospect amin'ny alàlan'ny antso an-tariby.
Ny fomba tena marina dia ny mamorona nomeraon-telefaona iray mavitrika ho an'ny loharano tsirairay izay ao anatin'ny kaody faritra iray ihany. Atỳ ny antso an-tariby tokana azo zahana tsara miverina amin'ny loharanom-panentanana na ny medium izay naharianao azy. Ho fanampin'izany, azonao atao koa ny manana ny antso miteraka a fitsidihana mankany amin'ny Google Analytics mankany amin'ny làlana virtoaly iray azonao ampidirina ao anatin'ny fanarahana ny fanovana.
Izany rehetra izany dia mitaky fanananao serivisy toa anao PhoneWagon, serivisy namboarina manokana ho an'ireo masoivohon'ny marketing hitantanana ny fanarahan-dia antso nataon'ny mpanjifany.
Endri-javatra amin'ny PhoneWagon Anisan'izany:
Fametrahana laharana finday eo noho eo - PhoneWagon dia manome dashboard mora vidy sy mora ampiasaina izay azon'ny rehetra takarina sy zahana. Amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra iray dia afaka mikaroka avy hatrany ny kaody faritra ianao ary manampy nomeraon-telefaona. Tsy latsaky ny 30 segondra dia afaka manampy nomeraon-telefaona iray ianao, mandrindra ny isa ary manomboka mampiasa avy hatrany.
Nomeraon'ny telefaona iraisam-pirenena - Manolotra nomeraon-telefaona iraisampirenena any amin'ny firenena 80 i Phonewagon. Ny dashboard anay dia mamela anao hitady nomeraon-telefaona isam-paritra sy kaodim-paritra. Tsy latsaky ny 30 segondra dia azonao atao ny manefy nomeraon-telefaona iraisam-pirenena anao ary manomboka mampiasa azy amin'ny fampielezankevitra anao.
Nomery an-telefaona eo an-toerana - Ny nomeraon-telefaona eo an-toerana dia voaporofo fa manova avo kokoa noho ny isa tsy misy tol ho an'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra orinasa kely. Na mila nomeraon-telefaona eo an-toerana ianao amin'ny tanàna iray tena voafaritra na kaody kaody eo an-toerana fotsiny dia mamela anao hanisy nomeraon-telefaona eo an-toerana ao anatin'ny 30 segondra ny PhoneWagon.
Isa tsy andoavambola - Ny nomeraon-telefaona tsy misy tolona dia tsara ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing nasionaly. Azon'izy ireo omena ny orinasanao ny fisian'ny fisian'ny firenena ary manolotra fomba ho an'ny mpanjifa hiantsoana anao tsy misy tol. Ao amin'ny dashboard anay, azonao atao ny manampy ny nomeraon-telefaona maimaimpoana maimaimpoana amin'ny safidy isan-karazany toa ny 888, 866, sy ny hafa. Ora latsaky ny 30 segondra vao manampy nomeraon-telefaona tsy andoavam-bola ary arindrao izany.
Port ny nomeraon-telefaona misy anao ankehitriny - Te hampiasa ny nomeraon-telefaona misy anao ve ianao sa hamindra ireo nomeraonao miaraka amina mpanome mpanara-maso antso hafa mankany amin'ny PhoneWagon? Mora. Azontsika atao ny mamindra ny isa anao amin'ny PhoneWagon amin'ny alàlan'ny dingana antsoina hoe "porting". Phonewagon dia mikarakara ny fampiakarana mavesatra rehetra ary hanana ny nomeraonao ao amin'ny kaonty PhoneWagon ao anatin'ny fotoana fohy.
Call Recording - Tsy ampy ny fanarahana ny antso an-tariby fotsiny. Ny fihainoana rakipeo antso dia hanampy anao hampiofana ny mpiasao amin'ny fanatsarana izay lazain'izy ireo hanovana antso maro kokoa ho mpanjifa mandoa vola. Ny firaketana an-tariby dia fomba tsara hiverenana ihany koa haka vaovao iray izay mety hadinonao ny nanoratra nandritra ny antso. PhoneWagon dia ahafahanao mirakitra antso na amin'ireo nomeraon-telefaonanao ary milalao hafatra fifampiarahabana raha te hampahafantatra amin'ilay miantso hafa fa voarakitra an-tsoratra ilay antso.
WHafatra hisper - Ny hafatray mibitsibitsika dia fomba iray tsara hanomezana ny mpiasa na ny mpiasa izay mamaly an-telefaona hevitra momba ny fiavian'ilay antso. Rehefa mamaly ilay antso izy ireo dia azonao atao ny milalao hafatra amin'izy ireo toa ny "ity antso ity dia avy amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny paositra miaraka amin'ny tolotra fihenam-bidy. Ny Agents izao dia manana sahan-doha amin'ny antso ary afaka mampifanaraka ny fomba fifandraisan'izy ireo amin'ny mpanjifa mifototra amin'io fampahalalana io. Toy ny kaody fisolokiana izay manampy anao handresy.
Miarahaba hafatra - PhoneWagon dia mamela anao hilalao hafatra arahaba ho an'ny miantso eo am-piandohan'ny antso. Azonao atao ny misafidy ny handraikitra hafatra arahabaina manokana amin'ny alàlan'ny fitaovana mpamorona hafatra fanaovan-tsoa mora ampiasaina na mampakatra hafatra efa misy amin'ny rakitra MP3. Ny hafatra miarahaba dia afaka mampahafantatra ny orinasanao sy manome ny mpanjifanao fahatsapana matihanina na azonao atao fotsiny ny mampahafantatra ilay miantso fa voarakitra an-tsoratra ny antso.
Fanomezana antso manokana - Ny fanondroana antso dia manampy anao hanasokajy, handamina na hanasokajiana ireo antso miorina amin'izay mason-tsivana tadiavinao arahana. Manana tag efa nisy sahala amin'ny "lead vaovao", "numero diso", "mpanjifa efa misy", sns. Manolotra ny fahaizana mamorona marika manokana miaraka amin'ny loko manokana avy amin'ny dashboard anay ihany koa izahay. Azonao atao ny manangana tatitra hahitanao hoe firy ny antso (na firy ireo mpiantso voalohany) no namboarina isaky ny tag.
Peratra miaraka - Ny fitarihana mitarika dia hafainganam-pandeha avokoa. Arakaraky ny hamalianao haingana, na hamalianao ny telefaona no ahitanao fa ho lasa mpanjifa mandoa vola ianao. Manolotra ny fahaizana mitendry telefaona marobe miaraka izahay. Ny olona voalohany mamaly dia hifandray amin'ilay miantso. Manampy amin'ny fampihenana ny fotoana fiandrasana amin'ny antso miditra, manome traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa, ary miteraka varotra bebe kokoa.
Kaontin'ny mpampiasa tsy voafetra - PhoneWagon mamela anao manampy mpampiasa tsy voafetra amin'ny kaontinao. Manolotra andraikitra maro isan-karazany amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana isan-karazany izahay, mba hahafahanao manome fidirana amin'ny rehetra ary hahafahan'izy ireo miditra fotsiny izay ilainy hidirana.
Kaontin'ny mpanjifa - PhoneWagon dia natao hamoronana orinasa na toerana marobe amin'ny kaonty tsirairay. Io dia ahafahanao mitazona ny angon-drakitra mifamatotra amin'ny orinasa na toerana marina toa anao ao amin'ny Google Ads. Ireo masoivohon'ny varotra dia afaka manampy ny mpanjifany rehetra ary manome fidirana ho an'ny mpanjifa tsirairay izay tsy afaka miditra amin'ny mombamomba azy ireo ihany.
Famintinana ny mailaka - Te handefa mailaka miaraka amin'ny data rehetra momba ny antsonao ve ianao nefa tsy mila miditra amin'ny dashboard-nao? PhoneWagon dia manolotra famintinana mailaka isan'andro, isan-kerinandro na isam-bolana. Azonao atao ny manamboatra an'ireny mailaka ireny ary avy amin'ny fonenanao aza. Io dia ahafahan'ny masoivohon'ny varotra mitazona hatrany ny marika rehefa mifanakalo amin'ny mpanjifa.
Fanairana mailaka hiantso - Fanairana mailaka fampandrenesana mailaka na fampandrenesana mailaka mamela anao handefa mailaka mandeha ho azy isaky ny misy antso vaovao avy amin'ny fampielezan-kevitra na azonao atao ny mametraka azy handefasana fanentanana manokana. Azonao atao ny manamboatra an'ireto mailaka ireto handefasana avy amin'ny fonenanao (ie "notifikasi@yourdomain.com") mba hitazomana ny marika tsy tapaka rehefa mifampiresaka amin'ireo mpanjifanao.
Tatitra mandroso - Midira mora foana amin'ny tatitra matanjaka mifototra amin'ny angon-drakitra antso an-tariby ataonao. Jereo angon-drakitra feno fahitana toa ny fampielezan-kevitra manao antso izay mivadika ho mpanjifa mandoa vola na firy ny antso avy amin'ireo mpiantso voalohany ary mihoatra ny 90 segondra. Ampiasao ity angona ity mba handraisana fanapahan-kevitra tsara amin'ny fandaniana doka sy / na hampiofana ny mpanjifanao amin'ny fomba ahafahan'izy ireo manao asa tsara kokoa amin'ny famadihana ireo antso ho mpanjifa mandoa.
Nomera telefaona mavitrika - Ny nomeraon-telefaona mavitrika dia ahafahanao manara-maso ny fiovam-po amin'ny antso an-tariby amin'ny fomba fanarahana ny fanovana endrika tranokala. Manome anao zana kaody iray izahay hanampiana ny tranokala na ny pejy fitobiana ary manao ny ambiny izahay. Ny antso an-tariby dia arahana amin'ny fotoam-pivahinianan'ny mpitsidika ary mahazo angon-drakitra momba ny toerana niavian'ny mpitsidika ianao, ny doka navoakan'izy ireo, ny pejy fiantsonan'izy ireo niantsona, sns. Mamorona isa mavitrika ao amin'ny solaoranao ao anatin'ny 30 segondra ary manomboka manara-maso ireo fiovam-po amin'ny antso an-tariby mba hahazoana sary feno ny zava-mitranga amin'ny fampielezankevitra ara-barotra anao.
Fanaraha-maso ny mpitsidika sy ny teny avo lenta - Manolotra ny fizotran'ny mpitsidika sy ny teny fanalahidy amin'ny alàlan'ny isa mavitrika izahay. Satria aseho isa tsy manam-paharoa ny mpitsidika tsirairay, fantatray rehefa miantso ilay laharana tokana aseho azy ireo ny mpitsidika ary noho izany dia azontsika atao ny miantso ny antson'izy ireo an-tariby amin'ny fotoanany. Manome antsika angon-drakitra goavambe mahavariana toy ny teny lakile notadiavin'izy ireo sy ny vondrona dokam-barotra niavian'izy ireo.
Fampidirana Google Analytics - Phonewagon dia manolotra fampidirana mivantana ho an'ny orinasa tsirairay ao amin'ny kaontinao PhoneWagon miaraka amin'i Google Analytics. Azonao atao ny manery ny antso an-taribinao rehetra hiditra ao amin'ny Google Analytics ho toy ny hetsika mba hahitanao ny tena zava-mitranga sy ny isan'ny fiovam-po entinao, eny fa na dia amin'ireo fisehoan-javatra tsy an-tserasera ireo aza.
Fampidirana Google Adwords - Ny PhoneWagon dia miharo mivantana amin'i Google Ads (Google Adwords taloha). Amin'ny tsindry iray dia azonao atao ny mampifangaro ny orinasa tsirairay ao amin'ny kaontinao PhoneWagon amin'ny kaonty Google Ads MCC anao, misafidy ny kaonty sub, ary avy hatrany dia mamorona hetsika fiovam-po vaovao antsoina hoe PhoneCalls izay hanosika ny fiovam-po amin'ny Google Ads ho an'ny antso rehetra avy amin'ny dinamikao ianao isa ao amin'io orinasa io.
Hafatra an-tsoratra mandeha ho azy - Mamorona valin-kafatra ho an'ny antso tsy hita sy hetsika hafa. Izany dia manampy anao hampifandray ny mpanjifa amin'ny fomba fifandraisany, ny fandefasan-kafatra an-tsoratra ary manakana azy ireo tsy hiantso mpifaninana aminy raha tsy mamaly ny findainao ianao.
PhoneWagon dia azon'i CallRail, mpitarika iray hafa amin'ny analytics fanaraha-maso antso.
Atombohy amin'ny PhoneWagon ny fitsapana anao maimaim-poana
Fampahafantarana: Tianay be ny PhoneWagon ka Ambasadaoro ho azy ireo izahay izao!
Tags: vondrona dokafanaraha-maso antsoantsoy ny fanaraha-maso ny fanaraha-masodoka googlegoogle adwordsGoogle Analyticshubspotfanaraha-maso findayphonewagon